Duulaanka Yuhuuda Ee Quduz Oo Sababay In Uu Guddeheeda Ka Bilaabmo Dagaal Sokeeye - #1Araweelo News Network
Duulaanka Yuhuuda Ee Quduz Oo Sababay In Uu Guddeheeda Ka Bilaabmo Dagaal Sokeeye
Magaalooyinka Yuhuuda Iyo Carabta Reer Israel Oo Bandow Lagu Soo Riggay Kadib weerraro Kacdoono sababay Iyo Mudaharaadyo Ka Bilaabmay Dunida.
> Pakistan oo ka jawaabtay Farriin Uu arrinta Qudus kaga hadlay Xoghayaha Qaramada Midoobay
Tel Aviv (ANN)-Ciidamadda Israel, ayaa weli duqaynta cir iyo dhulka ah ee Qaza, iyadoo aan loo miidaan deyin garaacista, Millateriga Israel ayaa Sabtidii duqeeyay dhisme ku yaal Gaza oo ay isticmaali jireen dhowr warbaahinta kasoo waramay xaaladda, kuwaas oo ay ka mid yihiin Middle East Eye, Al Jazeera iyo Associated Press.
Weriyeyaasha iyo shaqaalaha warbaahinta eek u sugnaa, ayaa sheegay inay ka carareen dhismaha al-Jalaa ee magaalada Gaza ka dib markii ay heleen ogeysiis saacad ah oo ay bixinayeen ciidanka Israel, iyagoo markii danbe si toos ah u burburiyey dhismaha.
Banaanbaxyo lagu canbaaraynayo dumqaymaha maalintii Lixaad galay ee Qaza, ayaa ka socda Britain, iyadoo lagu baaqayo in Israel joojiso duulaanka gumaadka ah ee dadka Falastiin lagu xasuuqayo ee ka socda Qaza.
Duulaanka Qaza ayaa noqday mid hoggaamiyaasha dunida Islaamku indhaha la qarsadeen, marka laga reebo dhawr dal oo Iran iyo Turkigu u horeeyaan, waxaana daawanaya xasuuqa Yuhuudu ku hayso shacbiga masaakiinta ah ee Falastiin dalalka Khaliijka ee sanandkii hore heshiishka loogu magacdaray Abraham Agreement la galay Yuhuuda.
Hase yeeshee duulaanka Israel ee Quduz, ayaa guddaha Isael ka abuuray kala qaubsanaan iyo kacdoono ka bilaabmay dhulka ay Yuhuudu xoogga ku haysato, iyadoo masuuliyiinta Israel ku tilmaamay arrintaa astaanta dagaal sokeeye oo guddaha ka qarxa.
Dhawr magaalo oo ka mid ah dhulka ay xoogga ku heysato Yuhuudu ee Falastiin maalintii afaraad waxa si xidhiidha uga socda kacdoono lagu diidanyahay duulaanka Quduz, iyadoo lagu cambaareynayo weerarkii qabsashada ee lagu qaaday xaafada Sheikh Jarrah, Qudus iyo magaalooyinka kale, iyo sidoo kale duqeymaha wali ka socda Marinka Gaza.
Magaalooyinka Iska hor imaadyadu ka socdaan waxa ka mid ah, Naasared, Sakhnin, Al-Raynah, Shfaram, Al-Taybah, Ararat Al-Muthalath, Tamra, Haifa, Al-Bacnah, Deir Al-Assad, Kafr Qara, Qalansuah, Araba, Baqa Al-Gharbiyya , iyo Kawkab Abu Al-Hija, iyo sidoo kale Tuba Al-Zangariya, Kafr Manda, Jadidah Al-Makr, Yafa Al-Nazareth, Kafr Kanna, Sha’ab iyo Jaffa, iyo magaalooyin kale oo ay wada degan yihiin Carabta reer Israel iyo Yuhuuda xoogga ku haysata.
Magaalada Lod, isku dhacyo hubeysan ayaa ka dhacay muwaadiniinta Falastiin iyo kooxo hubaysan oo ah budhcadda Yuhuuda xag-jirka ah, kuwaasoo socod ku maray waddooyinka xaafaddaha Carabta Israel, iyagoo ujeedkoodu ahayd inay ay weerar gaadmo ah ku qaadaan muwaadiniinta Carabta ah. Waxaa jira warar sheegaya in rasaas lagu furay Masjidka weyn ee magaalada xilli ay dadkii ku cibaadeysanayeen oo ay sallaada ku jireen, balse khasaare lama sheegin.
Wasiirka gaashaandhigga Israel Benny Gantz ayaa ku kordhiyay xaaladda degdegga ah ee magaalada laba maalmood, halka wasiirka amniga gudaha Amir Ohana uu booqday magaalada wuxuuna ammaanay habka cabudhinta ah ee ay adeegsadeen xoogagga qabsashada si loo cabudhiyo dibadbaxyada.
Kooxo hubaysan ayaa rasaas ku furay guryo ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ku yaal Lod, taas oo keentay in dadka deegaanka ay difaacaan naftooda iyo carruurtooda. Tani waxay horseeday inuu qarxo iska hor imaad hubaysan oo udhaxeeya labada dhinac, kaas oo saraakiisha Israel ku macneeyeen mid si xun u dhaawacay waxay ugu yeedheen midnimadii dadka deegaanka.
Sidoo kale, Magaalada Jaffa, waxa la wareegay guryaha dadka Carabta reer Isarel koox hubaysan oo Booliiska taageero ka helaya, waxay rasaas ku fureen Masjidka Siksik iyadoo ay ku cibaadeysanayaan gudaha, sida ku cad muuqaalo video ah oo la duubay, isla markaana warbaahintu hesahy, kadib markii qof muwaadin ah oo goobta ka dhowaa uu duubay.
Dhinaca kale, Wasiirka xuquuqul insaanka Pakistan, ayaa Sabtidii xoghayaha Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo ku tilmaamay rabshadaha hada ka socda bariga dhiexe inay yihiin “isku dhac” asaga oo yidhi taa badalkeeda u sheegay in aannay ahayn isku dhac ee waxa ka socda Qaza ay yihiin xasuuq.
Shireen Mazari ayaa barteeda Twitter-ka ku tidhi, “Ixtiraam sharaf leh SG (xoghayaha guud) tani maahan khilaaf, laakiin waa xasuuq ay geysteen xoogaga Shaqada iyo UN, waxay u baahan tahay inay fuliso mas’uuliyadeeda ah inay shacabka Falastiin ka ilaaliso argagixisada Israel.”
Qoraalkeeda ayay sii raacsiay Xusuusnow (Chapter) VII ee Axdiga UN-ka!, iyadoo tixraaceysa qayb ka mid ah dukumiintiga u oggolaanaya Gollaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay go’aamiyaan jiritaanka khatar kasta oo nabadda dunida waxyeelay, ama fal gardarro ah, iyo inay qaataan millatari iyo kuwa aan millateri ahayn ficil lagu soo celinayo nabada iyo amniga caalamiga ah.
Jimcihii, Guterres wuxuu ku baaqay “in la sii wado” iyo “in la joojiyo dagaallada” Gaza iyo Israel.”Waxaan codsanayaa in si deg deg ah loo joojiyo oo la joojiyo dagaalada Gaza iyo Israel. Dad aad u tiro badan oo rayid ah oo aan waxba galabsan ayaa horeyba u dhintey. Iskahorimaadkan wuxuu keliya ku kordhin karaa xagjirnimada gobolka oo dhan,” ayuu ku yidhi fariintiisa.
Weerarrada Israel ee marinka Qaza ee go’doonsan ayaa lagu dilay sideed kale oo Falastiiniyiin ah horraantii Sabtida, taasoo ka dhigaysa tirada dhimashada 139, oo ay weheliyaan 950 dhaawac ah, sida laga soo xigtay Wasaaradda Caafimaadka ee Gaza, waxaana laga soo sheegayaa Gaza xaalad murruga ah oo go’doonsan, iyadoo ay gantaalaha iyo madaafiicduna dul iyo hoos noqdeen duqaymuhu kuwo aan loo aaba-yeelin.
Sidoo kale, Lix caruur ah iyo laba haween ah ayay ciidamada Israel ku dileen weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday guri ay deganaayeen.
Xiisad ayaa ka taagneyd xaafada Sheekh Jarraax ee Bariga Qudus iyo Masjidka Al-Aqsa tan iyo bishii barakaysnayd ee Ramadaan, iyadoo ciidamadda Israel iyo kuwa deganaa ee Yuhuudu ay weerarreen Falastiiniyiinta.
Xiisadaha ayaa ka faafay Bariga Qudus ilaa Gaza kadib markii kooxaha Falastiiniyiinta ee wax iska caabinta halkaas ay wacad ku mareen inay ka aargudan doonaan weerarada Israel ay ku hayso Masaajidka Al-Aqsa iyo Sheikh Jarrah haddii aan la joojin.
Israel waxay qabsatay Bariga Qudus, halkaasoo ku taal Al-Aqsa, intii lagu jiray dagaalkii 1967 ee Carabta iyo Israel, waxayna gebi ahaan ba xidhay magaalada oo dhan 1980, tallaabadaas oo aannay weligeed aqoonsan beesha caalamku, waxase la rumasyan yahay in duulaanka xilligan uu yahay mid ay si ku doonayso in ay si dhab ah ula wareegto Masaajidka Al-Aqsa iyo gebi ahaanba Bariga Quduz.